သျှင်နေမင်း: April 2011
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ပြုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ရှိခြင်းကိုပြတဲ့
ကြိယာဖြစ်တယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဟာ နာမ်မဟုတ်ဘူး၊ နာမဝိသေသန မဟုတ်ဘူး။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ မှန်တဲ့အလုပ်ကို လုပ်တာဖြစ်တယ်" ဒီလိုအဆိုကို
၁၉၉၄ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာကျောင်းပိတ်ရက်မှာ ဆရာ/ဆရာမ
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းထဲ ကျွန်တော်ပါဝင်ခဲ့တယ်။ သင်တန်းမှာ
ကျွန်တော်တို့ကို ထမင်းဟင်းခူးခပ်ထည့်ပေးတဲ့ လုပ်အားပေး
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသား တော်တော်များများနဲ့ ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆိုတာ ကြိယာ"ဆိုတဲ့စကားက ကျွန်တော့်အတွေးထဲ ဝင်လာခဲ့တယ်။
တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားတချို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ကို ဂရုတစိုက်
ပြုစုစောင့်ရှောက်နေချိန်မှာ သူတို့ရင်ထဲ ဘာတွေဖြစ်နေလဲ? ဘာတွေနဲ့
ပြည့်နေမလဲ? သူတို့ရင်ထဲ ဖြစ်နေ၊ ပြည့်နေတာကို စကားလုံးတစ်လုံးနဲ့ပဲ
ဖော်ပြရပါလိမ့်မယ်။ ဒီစကားလုံးက ကျွန်တော့်ကို
ငယ်ရာကကြီးလာတဲ့အထိ ကျွန်တော်ဟာ ရင်ထဲကခံစားချက်ကို အလွယ်တကူ
ထုတ်ဖော်ပြတတ်သူ မဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ပတ်ကြာကျင်းပတဲ့
ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးသင်တန်းက လှုပ်ရှားမှုတချို့ဟာ ကျွန်တော့်ရင်ကို
ကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုင်လှုပ်ခံရတဲ့ ရင်ထဲကခံစားချက်ကို
ဘယ်လိုအပြုအမှုနဲ့ ထုတ်ဖော်ရမလဲဆိုတာကို ကျွန်တော်တွေးတောခဲ့မိတယ်။
ညနေအလုပ်ပြန်ချိန်မှာ ကျွန်တော့်အပြန်ကိုစောင့်နေမယ့် အဖေ၊ အမေတို့အတွက်
စားစရာဝယ်တယ်! လူခြေတိတ်ညနက်ချိန်မှာ သားသား၊ မီးမီးတို့ရဲ့
ဆက်သွယ်ရေးစာအုပ်မှာ ဆရာ/ဆရာမတွေအတွက် စာသုံးလေးကြောင်း ပိုရေးတယ်!
ဇနီးသက်သာအောင် မနက်၅နာရီမှာထပြီး လေသာဆောင်ကပန်းတွေကို ရေကူလောင်းတယ်။
ဒါတွေလောက်ပဲ ကျွန်တော်လုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီထက်ပိုများတဲ့ ခံစားချက်တွေကို
ကျွန်တော်ထုတ်ဖော် မပြတတ်ခဲ့ဘူး။ ဒီထက်ပိုဂရုစိုက်တဲ့ အပြုအမှုမျိုး
ကျွန်တော်မပြတတ်ခဲ့ဘူး။ ကျွန်တော်လည်း ကျွန်တော့်အလုပ်နဲ့ကျွန်တော်
အမေများနေ့ ရောက်ခါနီးမှာ အမေရဲ့ပင်ပန်းမှုတွေကို ကျေးဇူးတင်
အသိအမှတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အတန်းထဲက ကျောင်းသားတွေကို အမေ့အတွက်
"အမေကပြောတယ်... ဘာမှလုပ်စရာမလိုဘူး။ စာပဲ ကောင်းကောင်းကျက်ပါတဲ့"
"ကျွန်တော့်မေမေက သူ့ကို စိတ်ဆိုးအောင်မလုပ်ရင် ရပြီတဲ့"လို့ဆိုကြတယ်။
ကျောင်းသားတစ်ယောက်က "ဆရာ... ဆရာကရော! ဆရာ့မေမေကို ဘာလုပ်ပေးမလဲ?"
လို့မေးတယ်။ ကျောင်းသားရဲ့အမေးကြောင့် ကျွန်တော် ဘာပြန်ဖြေရမှန်းမသိ
ဟုတ်တယ်.. ကျွန်တော်ကရော? ကျွန်တော့်အမေအတွက် ဘာလုပ်ပေးရမလဲ?
ညစာလိုက်ကျွေးမယ်? ပိုက်ဆံနဲ့ကန်တော့မယ်? ပန်းတစ်စည်းလက်ဆောင်ပေးမယ်?
ကျွန်တော့်အမေကို ကျွန်တော် အသေအချာ၊ ဂရုတစိုက် စောင့်ရှောက်ခဲ့ပါတယ်။
အမေ ဘာမှလိုလိမ့်မယ် မထင်ဘူး! ဒါပေမယ့် ကျောင်းသားတွေကို အမေများနေ့မှာ
အမေ့ကျေးဇူးကိုသိတတ်အောင် တောင်းဆိုခဲ့တဲ့ကျွန်တော် ကျောင်းသားတွေရဲ့
စံပြဖြစ်အောင် အမေ့ကိုခြေထောက်ဆေးပေးဖို့ ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။
အမေများနေ့မှာ အမေ့ကို ကျွန်တော်ခြေထောက်ဆေးပေးမယ်လို့ဆိုတော့
ကျောင်းသားအများက "ဆရာလုပ်ရဲရင် ကျွန်တော်တို့လည်း လုပ်ရဲတယ်"
လို့ဆိုကြတယ်။ အမေ့ကိုခြေထောက်ဆေးပေးတာ ဘာများ မလုပ်ရဲစရာရှိလဲလို့
အမေများနေ့ တဖြေးဖြေးချည်းကပ်လာခဲ့သလို ကျွန်တော့်ရင်ထဲက
ဝတ္တရားတစ်ခုကလည်း တစ်ရက်ထက်တစ်ရက် ပိုလေးလာခဲ့တယ်။ ဖြူဖွေးနေတဲ့
အမေ့ရဲ့ဆံစတွေကိုကြည့်ရင်း၊ ကုန်းနေတဲ့ အမေ့ကျောကိုငေးရင်း ငယ်ငယ်တုန်းက
အမေ့ဘေးနား တွတ်တီးတွတ်တာ ချွဲနွဲ့ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်ကို
ကျွန်တော်မြင်ယောင်လာမိတယ်။ ဒီနှစ်မှာ အသက်(၄ဝ)ရှိပြီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်
အမေ့ကို "အမေများနေ့မှာ အမေ့ခြေထောက်ကို ဆေးကျောပေးပါရစေ"လို့
အမေများနေ့မှာ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကျွန်တော်ပြင်ချင်ခဲ့မိတယ်။
ကျွန်တော့်လို ယောက်ျားသားတစ်ယောက်အတွက် ခါးညွတ်ပြီး
နူးညံ့တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ ကျွန်တော်မတွေးတတ်ခဲ့ဘူး။ ကျောင်းသားတွေက
ဖုန်းမက်ဆေ့တွေပို့ပြီး အားပေးနေခဲ့တယ်။ ဇနီးကလည်း "ဘာဖြစ်လို့
မှန်တဲ့အလုပ်ကို မလုပ်ရဲရမှာလဲ?" လို့ အားပေးနေခဲ့တယ်။
အဲဒီနေ့က ညနေစာစားပြီးနောက် အမေ့ကိုကျွန်တော်ပြောတယ်။
"အမေများနေ့ အထိမ်းအမှတ်အနေနဲ့ အမေ့ခြေထောက်ကို သားဆေးပေးမယ်"
"ဘာဖြစ်လို ဒီလိုလုပ်ရတာလဲ? ဘာဖြစ်လို့လဲ?......" ကျွန်တော့်အပြောကို
အမေက နေမသိထိုင်မသာ မေးခွန်းတွေ အထပ်ထပ်ထုတ်နေခဲ့တယ်။
"အမေသိပ်မမေးနဲ့... ကျောင်းက report လုပ်ခိုင်းလို့ပါ"
ကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်နဲ့ ကျွန်တော်လုပ်သမျှကို အမေအမြဲအားပေးထောက်ခံခဲ့တယ်။
အခုလည်း reportတင်ရမယ်ဆိုတော့ ဘာမှသိပ်မမေးတော့ဘဲ ငြိမ်ငြိမ်လေးထိုင်ပြီး
ခြေထောက်ကိုဆန့်ပေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ဖက်လှည့်ပြီး ကျွန်တော့်ဇနီးကို
"ကျောင်းက ဘာဖြစ်လို့ ဒီလိုထူးထူးဆန်းဆန်း report တင်ခိုင်းရတာလဲ?" လို့
ဆပ်ပြာတွေပွတ်တိုက်ပေးချိန်မှာ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေ ပါးပြင်ပေါ်
အလိုလိုစီးကျလာခဲ့တယ်။ ငယ်ငယ်တုန်းက ကျွန်တော့်ကို
အမေခေါင်းလျှော်ပေးတော့ ကျွန်တော့်မျက်စိထဲ ဆပ်ပြာရည်ဝင်ရင် ကျွန်တော်
ကျွန်တော်ခြေကျိုးသွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဆေးရုံတက်နေတုန်း အမေက
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကိုလှည့်ပြီး ရေချိုးပေးတော့ ခြေထောက်အနာကို
သွားခိုက်မိတယ်။ ကျွန်တော်ငယ်သံပါတဲ့ အော်သံကြောင့်
အမေ့ကို ကျွန်တော်ခြေထောက်ဆေးပေးနေချိန် ကျွန်တော်သားသမီးသုံးယောက်လုံးက
ဘေးကနေ ထိုင်ကြည့်နေကြတယ်။ ကျွန်တော်အပြုအမှုတွေ ကြမ်းတမ်းနေလို့
အဘွားရဲ့ခြေထောက်ကို သူတို့ကူဆေးမယ်လို့ ဆိုနေကြတယ်။ ဇနီးက
တစ်မီတာအကွာကနေ ထိုင်ကြည့်ဖို့ သတ်မှတ်ပေးနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်ရည်တွေ
တသွင်သွင်စီးကျနေခဲ့လို့ ကျွန်တော့်ဆီက ဘာစကားလုံးမှ ထွက်မလာခဲ့ဘူး။
ခြေထောက်ဆေးပြီး၊ ခြောက်အောင်သုတ်ပြီး၊ အလှဆီတွေလိမ်းပေးပြီးတဲ့အထိ
ကျွန်တော်ထမရပ်ရဲခဲ့ဘူး။ ဇနီးက အမေ့ကို ဆိုဖာဆီတွဲပို့တော့ ကလေးတွေက
အဘွားနောက်တီတီတာတာဆိုရင်း လိုက်သွားကြတယ်။ အဲဒီအချိန်ကျမှ
ကျွန်တော်အမြန်ထပြီး ရေချိုးခန်းဆီ ပြေးခဲ့ပါတယ်။
ရေချိုးခန်းမှန်ထဲကနေ ကျွန်တော့်ကိုကျွန်တော် ပြန်ကြည့်မိတယ်။
ငယ်ရာကကြီးလာတဲ့အထိ ဒီလို ထိထိခိုက်ခိုက် ကျွန်တော်မငိုဖူးခဲ့ဘူး။
နောက်တစ်နေ့မှာ အမေ့ကို ကျွန်တော်ခြေထောက်ဆေးပေးနေတဲ့ ပုံတွေ အင်တာနက်ပေါ်
ရောက်သွားတော့ ကျောင်းသားတွေက "ဆရာ... သိပ်တော်တယ်" ၊ "ဆရာတောင်
ဆေးပြီးဆိုမှတော့ ကျွန်တော်တို့လည်း ဆေးမယ်" လို့ မှတ်ချက်ပေးကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ အင်တာနက်ပေါ်မှာ အမေတွေကို ခြေထောက်ဆေးပေးနေကြတဲ့
ကျောင်းသားတွေရဲ့ ဓာတ်ပုံတွေ များသထက်များလာခဲ့တယ်။ ပြီးတော့ တပျော်တပါး
ရင်ထဲကခံစားချက်ကို ထုတ်ဖော်ခဲ့ကြတယ်။ ကျောင်းသားတချို့က "ကျွန်တော့်မေမေ
အရမ်းပျော်သွားတယ်။ မေမေကပြောတယ်။ ကျွန်တော့်ကို မေမေ့ခြေထောက်ဆေးအောင်
ပြောနိုင်တဲ့ကျောင်းကို ကျောင်းလခပေးရကျိုးနပ်ပါတယ်တဲ့" လို့ပြောတယ်။
တချို့ကျောင်းသားကလည်း "ဆရာ.. ကျွန်တော့်အဖေဆို ငိုလိုက်တာဗျာ။
ကျွန်တော့်အဘွားက ဆုံးသွားပြီလေ" လို့ဆိုတယ်။
ကျောင်းသားတချို့ရေးထားတဲ့ "ဆရာ... ဆရာတကယ်သတ္တိရှိတယ်နော်!"ဆိုတဲ့
မှတ်ချက်ကိုဖတ်ပြီး ကျွန်တော်ရယ်မိတယ်။ သားငယ်တစ်ယောက်ကို
ခြေထောက်ဆေးပေးနေတဲ့ အမေတစ်ဦးကို သတ္တိရှိတယ်လို့
အမေ့ကိုခြေထောက်ဆေးပေးတော့ "သတ္တိရှိတယ်" လို့ ချီးကျူးခံရတယ်?
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကို ဖော်ကျူးတဲ့လမ်းမှာ
ဘာအခက်အခဲ၊ ဘာအတားအဆီးတွေ ဖြစ်နေခဲ့သလဲ? လူလူချင်းကြားက
"ချစ်ခြင်းမေတ္တာ"ရဲ့ အပြန်အလှန်ပေးပို့မှုတွေဟာ ဒီလောက်ပဲ
တုန့်နှေးနေခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်ဟာ အသိပညာရှိသူတစ်ယောက် မဟုတ်ခဲ့လို့
ဒါတွေကို ကျွန်တော်သိပ်နားမလည်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် "ချစ်ခြင်းမေတ္တာ"ဆိုတာ
ပြုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ရှိခြင်းကိုပြတဲ့၊ မှန်တဲ့အလုပ်ကို
လုပ်တာဖြစ်ကြောင်းကို ကျွန်တော်နားလည်ခဲ့ရတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာရဲ့
အပြန်အလှန်ပေးပို့မှုတွေ မျိုးဆက်တစ်ဆက်ပြီးတစ်ဆက် ပြန့်ပွားနိုင်ဖို့
Posted by သျှင်နေမင်း at 9:39 AM
တဖက်သတ်ဖြစ်တဲ့ချစ်ခြင်း
ငါ ကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းလို့ 
ကောင်မလေးရဲ့ပုံတချို့ 
တန်ပြန်မှု့ မရှိတဲ့သက်ရောက်မှု့ 
နယူတန်ရဲ့ အမှားလို့မဆိုခြင်းဘူး..
ငါပေးတဲ့ အချစ်တွေ မင်းသိပါစေ....၊ ။
ငါဖန်တီးတဲ့အလွမ်းဆုလာဒ်ကို
ခပ်ဆွေးဆွေးလေးပဲ လွမ်းနေအုံ့ မယ်....။ ။
Posted by သျှင်နေမင်း at 5:53 AM
Posted by သျှင်နေမင်း at 3:07 AM
ပြီးတော့ ဖခင်ဖြစ်သူက တစ်စုံတစ်ခုကို အင်္ကျီအိပ်ထဲကနှိက်ပြီး လက်ထဲဆုပ်ကိုင်ထားလိုက်ပါတယ်။
သမီးဖြစ်သူက ခေါင်းညှိက်တဲ့အခါမှာတော့ ဒါဆို သမီး ထိုင်ထ ၁ခေါက်လုပ်..
သမီးဖြစ်သူက ထိုင်ထ လုပ်လဲပြီးရော ဖခင်ဖြစ်သူက ၃ ခေါက်လုပ်မှပြမယ်လို့ဆိုပြန်တယ်။
ထိုအခါ သမီးဖြစ်သူက ၁၀ခေါက်လုပ်ပြီးတော့..အဖေရယ် သမီးကို ဘာလဲဆိုတာသိအောင်ပြပါတော့လို့ဆိုတယ်။
အဲ့ဒီတော့မှ ဖခင်ဖြစ်သူက လက်ထဲမှာဆုပ်ကိုင်ထားတာလေးကိုဖွင့်ပြလိုက်တော့ အကြွေတစ်မတ်စေ့ ဖြစ်နေတယ်။
အဲ့ဒီအကြွေစေ့လေးကိုပဲ လက်ထဲမှာနောက်တစ်ခေါက်ပြန်ဆုပ်ကိုင်လိုက်ပြီးတော့ သမီးဖြစ်သူကို ထိုင်ထ ၁၀ ခေါက်လုပ်ရင်ပြမယ်လို့ပြောတယ်။
သမီးဖြစ်သူက မတွေ့ချင်ပါဘူး.. သမီးတွေ့ပြီးပြီပဲဟာ..လို့ပြန်ပြောလိုက်တယ်။
ထိုအခါ ဖခင်ဖြစ်သူက ၁ ခေါက်ပဲလုပ်ပါသမီးရယ်..အဖေပြပါ့မယ်လို့ဆိုသတဲ့။
အဲ့ဒီတော့မှဖခင်ဖြစ်သူက.. ဒီဥပမာလေးလိုပဲသမီးရယ်.မတွေ့ခင်မမြင်ခင်က တန်ဖိုးကြီးမားပြီးလိုသလို ခိုင်းလို့ရတဲ့
ဒီမတ်စေ့လေးဟာ တွေ့မြင်သွားပြီးတဲ့နောက်မှာ တန်ဖိုးမရှိတော့ဘူးမဟုတ်လား…
ဒီလိုပဲသမီးရေ..ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ထားသင့်တဲ့အရာတွေကိုလဲ အချိန်မတန်ခင်မှာ တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကို
ပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး..သမီးတို့ရဲ့ အပျိုစင်ဘ၀ကိုလဲဒီမတ်စေ့လေးလိုပဲ အချိန်မတန်ခင် တန်ဖိုးမဲ့သွားအောင် သူတစ်ပါးကိုပေးမမြင် ပေးမတွေ့သင့်ဘူး။
Posted by သျှင်နေမင်း at 7:06 AM
ကြည့် နေမိတဲ့ နောက်
မျော်လင့် ခြင်းနဲ့ ခရီးဆက်
ဒို့နှစ်ယောက်ပြန်ဆုံမယ့် 
တစ်ရက်ပေါ့ ..............................။ ။ ။